Amsterdam: Sahand Sahebdivani Sy Ny Fiventesany Tantara Mahatalanjona (Ampahany 1) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2016 2:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Dansk, Ελληνικά, Français, русский, English
Sahand Sahebdivani sy ny reniny, Parwin Akhbari, nifampizara sehatra tao Antwerp, Belzika. Sary: Facebook (fampiasàna nahazoana alalàna).
Ity no ampahany voalohany amin'ny tafa misy andiany roa nifanaovana tamin'i Sahand Sahebdivani.
Tao anatin'ny fanahin'ny fifampizaràna sy fankalazàna ny fifangaroana ara-poko no namoronana ny Mezrab mba hanangonana ny olona manodidina ny mozika sy ny fitantaràna. Ao Amsterdam no misy azy, habaka iray ny Mezrab izay alehan'ny olona ifampizaràny tantara, mozika, gadona, sy ny maro hafa. Ankehitriny, lasa fantatra koa amin'ny kaonseritra, fanaovana zavatra tsy niomanana ary hatsikana ihany koa, ary lasa toerana mamin'ny fon'ireo mpankafy kolontsaina ao Amsterdam. Taorian'ny taona marobe nitantaràna isan-kalina tantàra mampivanàka, nisokatra ny sekoly iray hampianatra ity tena taokanto ity ao amin'io ivontoerana ara-kolontsaina io, tsy ela akory izay. Efa nivoatra koa niaraka tamin'ny mpamorona azy, Sahand Sahebdivani sy ny fianakaviany, ny hevitra namoronana ny Mezrab. ny fikirizana, ny maha-izy ny tena, ny taokanto, ary jiny kely (devolin'ny kolontsaina Arabo sy Miozolmana)— ampahany amin'ny tantaran'ny Mezrab daholo izany.
Mba hahafantarana misimisy kokoa momba ny Mezrab, vao haingana ny Global Voices no niresaka tamin'i Sahand, izay nilaza taminay momba ny loharano niavian'izy io sy ny nanombohan-dranamana. Noresahany ny fifangaroan'ny kolontsaina, ny fanehoana ny vehivavy any anatin'ny tantara fahagolan'i Iràna, ary ny tantaran'ny Mezrab, izay nanomboka toy ny fombandrazana kely teny anivon'ny ankohonana ary ankehitriny dia iray amin'ireo habaka ara-kolonsaina ankalazaina indrindra ao Amsterdam.
Ny marina [ny Mezrab] dia manomboka aminà fangaro roa fototra: lehibe teo anivonà ray aman-dreny nanana ireny talenta ireny aho, izay tsy nampiasain'izy ireo. Tena nahazo fampianarana ambony ry zareo, saingy rehefa tonga teto izy ireo [teto Hôlandy], ny hany azony natao dia ny nanàsa sy ny nahandro, izay nataony tsy narahan-taraina. Io no fiainana iray neken-dry zareo. Nefa nandritra izany fotoana izany tao an-tokantrano, dia ireny olona mahafinaritra ireny ry zareo, olon'ny kolontsaina. Sady mahandro no mitanisa tononkalo sy mihira.
Tany amin'ny faha-20 taonako tany aho no nanomboka nanàsa olona ho any an-trano, hiaraka misakafo […]. Lasa toy ny fahombiazana ny nahafahanay nanokatra habaka iray afaka hanaovana tahàka izany koa. Am-pahatsorana, fony aho folo taona dia nanokatra toerana mitovy amin'io ny raiko, ivon-kolontsaina iray teto Amsterdam. Nantsoina hoe Khaneye Aftab (“Tranon'ny Taramasoandro/Hazavana”), ary tsy mifanalavitra amin'ny Mezrab io habaka io. Tsaroako fa tao no nahitako voalohany ny mpiventy tantara Persiana-ko. Avy any Frantsa ry zareo. Betsaka zavatra nahafinaritra niseho tao. Nahandro i Dada, nisy horonan-tsarimihetsika, saingy tsy nandeha satria natao ho an'ny Iraniana irery ilay izy. Tamin'ny teny Persiana daholo izay rehetra natao. Araka izany, tsy nahatsiaro nahazo aina mihitsy ireo tsy Persiana tao. […]
[Noho izany, nieritreritra aho] toerana iray hafa tahàka ity, nefa misokatra ho an'ny kolontsaina rehetra. Nanokatra ity toerana ity izahay, izay mirefy eo amin'ny 20 metatra toradroa eo. Tsaroako fa nanintona bebe kokoa ireo olona avy any Eoropa Atsimo, Espaina, Italia, Amerika Latina izy ity. Tsy dia ireo avy any Afovoany Atsinanana loatra araka ny nandrasana, saingy betsaka ny Amerikàna Latina, Espaniôla, Italiana ary Portiogey… Kiorda vitsivitsy… Tao anatin'ny dimy taona no niventesanay tantara, saingy ny betsaka indrindra dia ny mozika nataonay ho toy ny fomba hampifandraisana ny olona. Betsaka ireo fotoana nanaovanay zavatra tsy niomanana. Ho ahy, izay toerana izay no ‘conservatoire’ ho ahy. Tsy nianatra momba ny mozika velively aho, noho izany dia zava-dehibe ny filalaovana mozika ao isan-kerinandro. Teny an-pandrasàna aho no nianatra ny fomba filalaovana mozika. Izany no nahaterahan'ny Mezrab.
Arakaraky ny fivoaran'ilay tetikasa, nanofana ny tenany ho mpiventy tantara i Sahandary, nahatsapa fa mila sehatra midadasika kokoa ilay endrika taokanto. Tamin'io fomba io no nahatonga ny Mezrab ho fantatra kokoa amin'ny maha-toerana iray azo anaovana fiventesana tantara sy ilazàna izao karazana tantara rehetra izao. Tena zava-nisy, anganongano, noforonina, ary avy amin'ny fombandrazana samihafa—atao amin'ny teny Anglisy sy Hôlandey. Nanomboka niroborobo ihany koa ny fahitàna ny Mezrab ety anaty aterineto, ary hita ao amin'ny YouTube izay fivoarany izay.
Samy mizara ny lahatsarin'ireo zavabita, na ny Mezrab Cafe na ireo mpankafy. Manolotra andran-tsira momba ity zava-mahaliana ity ireny firaketana ireny. Lahatsary iray avy any amin'ny 8 taona lasa, ohatra, no mampiseho fotoana iray tsy niomanana nitranga tao anatin'ilay efitrano mirefy 20 metatra toradroa (eo amin'ny 200 faladiha eo), izay niarahan'i Parvin, renin'i Sahand, tamin'ireo mpiangaly mozika.
Azo jerena ao amin'ny MezrabCafe ao amin'ny Youtube ny sasany amin'ireo lahatsarin'io vanimpotoana io :
Milaza zavatra betsaka lavitra noho ny fampitàna ireo tantara fahiny miainga avy aminà andian-taranaka iray ho any amin'ny andian-taranaka hoavy fotsiny ny fiventesana tantara; fomba ihany koa io hitadiavana ireo tantara very, toy ireo tantara manasongadina ny toeran'ny vehivavy tamin'ny andro fahagola, ohatra. Amin'io fomba io dia raisin'ny Mezrab ny hevitra sy ireo hetsika izay tsy hoe fotsiny fifandraisana ara-kolontsaina, fa koa fitoviana. Ireny tantara ireny dia avy any amin'ny toerana lavitra, toerana fahagola, saingy manako miaraka amin'ny idealin'ny vanimpotoana misy antsika. Lasa toeran'ny fifanakalozana velona eo amin'ny lasa sy ny ankehitriny ny Mezrab.
Misy ilay toetra kely mikatsaka ny lafatra izay ao anatiko ao rehefa milaza tantara iray aho. Izay aloha dia azo antoka. Nefa heveriko fa ny fomba fijery diso dia ny mitady tantara ka avy eo manisika ilay fikatsahana ny lafatra avy amiko ho ao anatin'ireo tantara. Ho ahy ny tena misarika dia ny hoe marobe amin'ireny tantara ireny no efa manana sahady an'ireny fihevitra ireny. Betsaka lavitra noho izay nandrasanay aza. Izahay dia avy amin'ireo firenena izay ambany ny anjara asa raisin'ny vehivavy mitaha amin'ny an'ny lehilahy—eritreretiko hoe ny ao Afovoany Atsinanana, ary angamba rehefa mijery an'i India.
Ny azoko atao dia afaka mikaroka ireny tantaranà famoretana ireny aho ary manova azy ireny hifanaraka amin'izay lafatra eritreretiko, saingy tsy heveriko ho io no làlana tsara hanaovana azy, indrindra raha ireo tantara izay efa manana betsaka sahady ao anatiny ny fitantaràna mandrisika ny vehivavy. Araka izany, ohatra ho an'ilay tantara Rostan sy Tahmineh. Io dia tantara iray izay fiventin'ny raiko fony aho mbola ankizy, ho toy ny ohatra amin'ny herin'ny vehivavy iray. […] Rehefa bangoina, betsaka ny ohatra momba ny herin'ireo vehivavy tsy azo laizina. Mihoatra lavitra noho ny ezaka hamorona ireny pitsopitsony ireny ao anatin'ilay tantara, ka hametraka azy ho eny anoloana no tanjon'ilay fikatsahako ny lafatra.
Tena mahafinaritra ny mahita hoe misy ireny vehivavy mahery ireny any anatin'ireny tantara ireny, ary amin'ny lafiny iray koa, somary mba manome hery sy fahafahampo ny mahafantatra fa ny fitondràna amin'izao fotoana izao, izay maniry hitàna ny vehivavy ho ambany hatrany, no iray amin'ireo tsy maintsy manova ny tantara, hifanaraka amin'ny fomba fitantàran-dry zareo.
Farany, mitombina ihany koa ny zavatra tahaka ity ho an'ny nasionalisma, satria ny Iraniàna, tena nasionalista be ry zareo, nasionalista gaigy be mihitsy, ary raha tena nasionalista ianao, iray amin'ny teboka mampirehareha anao ity Shahnameh ity [tononkalo tsy manampaharoa/tsy hay hadinoina nosoratan'ilay poeta Persiana Ferdowsi]. Ankehitriny, ireo tena maherifo manandanja ao amin'ny Shahnameh dia fifangaroana avy amin'ny Iraniana sy rà avy amin'ny fahavalo. Saiky tsy misy “rà Iraniana madio rano” izy rehetra. Samy nanana ray aman-drenibe na reny izay avy amin'ny antsoina hoe “ankolafy fahavalo,” ary, amin'ny lafiny iray, afaka ampiasaina ho toy ny fanefitra io, ity boky ity, ity tahirin'antitra momba ny tantara ity. Zavatra tena manainga fanahy izany ho ahy.
Ao anatin'ny ampahany faharoa amin'ity tafa ity, resahan'i Sahand betsaka amin'ny antsipirihany ny fifankahitàn'ireo olona, kolontsaina marolafy, ary ny tanjaky ny tantara, na ety anaty aterineto izany na ivelany.